Instagram na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ maka Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Netwọk mmekọrịta na-abawanye na e-azụmahịa. Ihe akaebe nke a bụ Instagram, nke gbakwunyere n'oge na-adịbeghị anya atụmatụ ọhụrụ nke na-enye ndị na-ere ahịa ohere itinyekwu ozi gbasara ọdịnaya ha biputere na foto ma ọ bụ vidiyo ha na-ekerịta n'elu ikpo okwu.
O kwesiri ekwusi na nke a netwọk mmekọrịta O tinyeworị nhọrọ ịzụta site na ngwa mkpanaka na 2015, mgbe ọ malitere ikwe ka ndị mgbasa ozi gbakwunye bọtịnụ "Zụta ugbu a" na mgbasa ozi metụtara ụlọ ahịa mkpọsa.
Dabere na Jim Squires, onye bụ onye ntụzi ọrụ arụmọrụ nke Instagram, 60% nke ndị mmadụ na-ele anya n'ọtụtụ nhọrọ na ihe tupu ịzụrụ. O kwukwara na oge ụfọdụ ndị ahịa anaghị adị njikere ịpị nhọrọ "ịzụta" ozugbo na foto ahụ n'ihi na ha nwere ike ịchọ ozi ndị ọzọ dịka ọnụahịa, nha, agba, wdg.
Kọrọ Ndị ahịa 20 US dị ka Kate Spade, Warby Parker, na JackThreads, ha ga-amalite ịkekọrịta mbipụta "organic" nke isiokwu ebe obere akara ngosi nwere akụkọ ifo "pịa ebe a iji hụ" ga-esonye, ​​nke dị na akụkụ aka ekpe ala nke foto.
Wayzọ a mgbe Onye ọrụ Instagram pịa akara ngosi, mkpado ga-egosipụta na ihe ndị dị n'ime post. Ndị ọrụ nwere ike iji akara ahụ nweta ozi zuru ezu gbasara njirimara ngwaahịa na nkọwapụta, yana ọnụahịa.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ndị na-ere ahịa ga-enwekwa ohere itinye njikọ nwere isi okwu "zụta ugbu a" n'ụzọ dị otú a na a ga-eduzi ndị nwere mmasị ịzụ ngwaahịa ahụ kpọmkwem na weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị nke ndị na-ere ahịa.
E kwuwokwa na ọ bụ ezie na mbipụta ndị a abụghị mgbasa ozi dịka nke a, ọ dị ka enwere ike itinye mgbasa ozi n'ọdịnihu. Nke a ga-eme Ecommerce na Instagram tinyekwuo n'ime ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Instagram na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ maka Ecommerce
Dị na Ecommerce na ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị